Realme Narzo 30 5G vs Realme GT 5G: ny fampitahana maharitra | Androidsis
Realme Narzo 30 5G vs Realme GT 5G: ny fampitahana farany
Ny mpanamboatra Aziatika Realme dia natsangana nandritra ny taona maro ho iray amin'ireo marika manan-danja indrindra, manolotra modely samihafa amin'ny vidiny mirary. Modely iray izay milatsaka kely amin'ny vidiny hatramin'ny 16 ka hatramin'ny 25 Jona amin'ny AliExpress Izy io dia ny Realme Narzo 30 5G, finday avo lenta izay mahomby tanteraka amin'ny karazana fampiharana sy lalao rehetra.
Mampahatsiahy anao izahay fa afaka mividy eto ny Realme Narzo 30 5G amin'ny vidiny tsara indrindra.
Ny Narzo 30 5G dia endrika ara-toekarena raha ampitahaina amin'ny Realme GT 5G, dia fitaovana roa mitovy fifandraisana izy ireo, na dia avahana amin'ny famaritana marobe aza, anisan'izany ny fony. Ny famolavolana amin'ny maodely roa dia mitandrina tsara, mitovy ny rafitra mpampita sy ny rafitra fiasan'izy ireo.
2 Fakan-tsary mifanatrika
3 Ny bateria, lafiny ifotony
4 Fifandraisana amin'ny telefaona
5 Ny rindrambaiko
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny Realme Narzo 30 5G sy Realme GT 5G dia manomboka amin'ny tontonana apetrak'izy ireo, ny voalohany dia LCD 6,5-inch misy ny vahaolana Full HD + ary ny tahan'ny fanavaozana 90 Hz, ny faharoa dia AMOLED (Full HD +) 6,43 miaraka amin'ny tahan'ny famelomana 120 Hz. Izy roa dia manampy fakan-tsarimihetsika fantsohana loaka eo anoloana sy famolavolana miloko be dia be.
Ny mpikirakira ny maodely roa dia avy amina mpanamboatra hafa, ny Narzo 30 5G dia mametraka ny MediaTek Dimensity 700, puce iray afaka manao alohan'ny fampiharana sy fampiharana rehetra, ny GT 5G dia mampiditra ny Snapdragon 888 mahery ho fenitra. Ao amin'ny sehatry ny sary, MediaTek manampy Mali-G57 MC2 GPU, raha i Qualcomm kosa miakatra ny Adreno 660 mahery, miaraka amina fampisehoana mahatalanjona rehefa mampiasa fampiharana isan-karazany sy lalao farany.
Lafiny iray hafa manasongadina ny fahatsiarovana sy fitehirizana, ny Realme Narzo 30 5G dia tonga miaraka amina safidy RAM tokana izay mahatratra 4 GB, ny Realme GT dia manome telo, miaraka amin'ny 6, 8 ary hatramin'ny 12 GB. Efa ao anaty fitehirizana zavatra mitovy amin'izany no mitranga, ny Narzo 30 dia mitoetra ao amin'ny safidy 128 GB (azo ovaina amin'ny MicroSD) sy ny GT amin'ny safidy 128 sy 256 GB, azon'ny MicroSD ihany koa azo esorina.
Ao an-damosin'ireo telefaona roa ireo dia mametraka masolavitra telo, ny fahasamihafana dia mitranga amin'ny isan'ny megapixel amin'ny iray sy ny iray hafa. Ny fakantsary lehibe an'ny maodely Realme Narzo 30 5G dia 48 megapixels, ny faharoa dia makro 2 MP ary monochrome 2 megapixel ny fahatelo.
Miroso amin'ny fakantsary aoriana an'ny Realme GT, ny voalohany dia 64 megapixel, ny faharoa dia zoro 8 megapixel ary ny fahatelo makrozy 2 megapixel, mpanampy manan-danja. Efa eo alohan'ny Realme Narzo 30 5G 16 megapixels izy ity, toy ny ao amin'ny Realme GT, izay sensor miaraka amina megapixel mitovy aminy, mety tsara amin'ny fakana sary sy horonan-tsary tsara.
Ny bateria, lafiny ifotony
Ny iray amin'ireo zavatra nihatsara rehefa nandeha ny fotoana dia ny fizakantenan'ny telefaona, zavatra ankafizin'ny mpanjifa ny fitaovana. Ny Realme Narzo 30 5G dia miakatra 5.000 mAh, ampy hiaretana mandritra ny andro fiasana iray mahery, ny Realme GT dia nilatsaka hatramin'ny 4.500 mAh.
Ilay iray amin'ny Narzo 30 ohatra dia lasa fiampangana haingana 18W, ny enta-mavesatra dia matetika ao anatin'ny 50 minitra manomboka amin'ny 0 ka hatramin'ny 100%, fotoana iray avo. Ny Realme GT dia manana fiampangana haingana 65W, mameno ny finday avo lenta ao anatin'ny antsasaky ny adiny iray hatramin'ny 0 ka hatramin'ny 100%, ary iray amin'ireo haingam-pandeha indrindra eo amin'ny tsena ankehitriny.
Fifandraisana amin'ny telefaona
Ny fifandraisana rehetra dia horaisina an-tariby amin'ny telefaona, satria zava-dehibe ny ahafahana mifandray amin'ny Internet, amin'ny fitaovana iray, mamindra data ary zavatra maro hafa. Ny Realme Narzo 30 5G dia mampiditra 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, Dual SIM ary fampiasa minijack headphone.
Na izany aza, ny Realme GT dia manampy mihoatra na latsaka ny fifandraisana mitovy, 5G (Dual), Wi-Fi 6 (hafainganam-pandeha ambonin'ity tranga ity), Bluetooth 5.2, NFC ary Dual GPS. Ny GT dia tsy isalasalana fa finday finday azo antoka rehefa miresaka fifandraisana haingam-pandeha, indrindra amin'ny karazana fifandraisana.
Tsy dia samy hafa firy izy ireo raha ny amin'ny fametrahana ny rafitry ny fandidiana, samy mampiditra ny Android 11 eo ambanin'ny saron-kevitry ny Realme UI 2.0, iray amin'ireo sosona izay nihatsara tato anatin'ny taona vitsivitsy. Realme dia nandroso fandrosoana betsaka tao, ankoatry ny fanampiana safidy maro hanaraka ny hafa toa ny MIUI na EMUI.
Ny fahamendrehana dia lasa rehefa mampiasa ny habetsaky ny fahatsiarovan'ny finday tsirairay, ohatra amin'ny ny Realme Narzo 30 5G dia manana modely 4 GB ho an'ny 6, 8 ary 12 GB ao amin'ny Realme GT. Ny mora dia mitovitovy, satria tena ilaina ny fisian'ny injeniera sy ny mpamorona maro ao ambadiky ny sosona amin'izao fotoana izao.
Ny maodely Realme Narzo 30 5G dia miloka amin'ny endrika avant-garde, mitovy amin'ny telefaona hafa an'ny marika, misy takelaka saika ny efijery rehetra, afa-tsy ny tapany ambany izay ahitàna ny bezel. Ny fakan-tsary aloha dia loaka, zara raha maka toerana hampiasaina.
Mifindra amin'ny Realme GT izao, zava-dehibe ny fanavaozana rehefa maneho ny smartphone noforonina mba hanatanterahana ireo toe-javatra misy. Ny efijery dia mitazona ny faritra manontolo, bezel 4% fotsiny hita, ny fakantsary, toy ny an'ny maodely Realme Narz0 30, dia karazana voaravaka, mipetraka amin'ny ilany havia.
Samy misy Realme Narzo 30 sy Realme GT Nandritra ny fotoana lava, ny voalohany dia natomboka tamin'ny Mey 2020. Ny Realme GT dia nambara tamin'ny fiandohan'ny volana martsa ho toy ny telefaona lalao, mety ho an'ireo izay maniry fahefana amin'ny vidiny mifaninana tokoa.
Ny vidin'ny Realme Narzo 30 5G dia manodidina ny 219 euro, na dia hidina ambany aza izany satria efa an-tsena no hita teny amin'ny tsena nandritra ny herintaona mahery. Ny tsara dia terminal 5G izy amin'ny vidiny ambany 300 euro, ho safidy mora vidy ho an'ny mpampiasa mitady terminal terminal misy vidiny.
Ny Realme GT etsy ankilany dia manana vidiny marobe Miankina amin'ny fikirakira voafantina, na amin'ny RAM 6, 8 na 12 GB ary fitahirizana 128/256 GB. Ireo maodely natomboka tamin'ny voalohany dia ny 8/128 GB ho an'ny 369 euro ary ny 12/256 GB ho an'ny 499 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Realme Narzo 30 5G vs Realme GT 5G: ny fampitahana farany
Redmi Note 10T, finday toy ny Redmi Note 10 5G, fa miaraka amin'ny 4G